Chuangmei Intelligent Technology Co., Ltd. bụ ọkachamara na R & D, imepụta na imepụta usoro dị iche iche latex gloves mmepụta edo edo, eriri nitrile gloves production, PVC gloves production lines, condom machinery and equipment, diaper machinery and sanitary nweta akwa nhicha igwe na akụrụngwa. A ọkachamara ígwè n'ichepụta ụlọ ọrụ tụnyere ahia, technology, na ọrụ. Companylọ ọrụ anyị etinyela aka na nyocha akụrụngwa akụrụngwa na mmepe yana njikarịcha mmepụta, wee malite ọrụ ntụgharị nke ngwa akụrụngwa na usoro mmepụta.
Onye nchoputa, Mr. Chen, gụsịrị akwụkwọ na Jingdezhen Ceramics University na Jiangxi na 2002. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, ọ nọwo na R&D na imewe na China nke a maara nke ọma diaper na sanitary napkin equipment machinery factory ma nwee ọtụtụ ahụmahụ na usoro nhazi. Na 2015, ọ malitere ibute kọntaktị na akụrụngwa na-emepụta ngwa ngwa, yana ngalaba Chuangmei Intelligent Technology Co., Ltd. yana ndị injinia nwere ihe karịrị afọ iri nke ahụmịhe aka ọrụ aka, raara onwe ha nye iji wuo nnukwu igwe na akụrụngwa emere na China. .
A na-ebupụ ngwaahịa Chuangmei Intelligent Technology Co., Ltd. gaa n'ahịa ụlọ na nke mba ọzọ: Europe, South America, Southeast Asia, Middle East, West Asia, Africa na mpaghara ndị ọzọ. All na-nnọọ ka ịjụ ase.
Chuangmei Intelligent Technology Co., Ltd. emi odude ke Taiwan Business Investment Mpaghara nke Quanzhou, Fujian, a mara mma ala gbara osimiri okirikiri obodo na n'ebe ọdịda anyanwụ nke China Taiwan Strait. Ugbu a nwere ihe karịrị 200 ndị ọrụ, nwere nhazi noo na sere noo, na nwere zuru ezu nhazi akụrụngwa，factory ebe ruru 11,000 square mita, wWith onwe ha ụlọ ọrụ ụlọ ebe nke 700 square mita.
Kemgbe nguzobe ya, ụlọ ọrụ a na-agbaso usoro ihe ọmụma nke ụlọ ọrụ nke "na-ewere sayensị na teknụzụ dị ka ihe nduzi, mma dị ka nkwa, ugwu maka nlanarị, na ọhụụ maka mmepe"; nwee olile anya ịtinye ịma mma ụlọ ọrụ mmepụta ihe igwe China na ngosipụta nnukwu igwe na akụrụngwa emere na China n'ahịa mba ụwa.